Uyitshintsha njani indlela yokukhuphela ye-SnapTube app? - LifeBytes | LifeBytes
Iofisi yovulo 2016
Khuphela i-Spotify Premium APK simahla
Guqula indlela yokukhuphela usetyenziso lweSnapTube
Uyilungisa njani i-pc screen yam inkulu kakhulu?
Uyicoca njani ikhonsoli yakho yeXbox ngaphandle kokuyonakalisa
Uyifaka njani iToliki kaGoogle kwibar yesixhobo?
Ungayitshintsha njani indlela yokukhuphela usetyenziso lweSnapTube?
Uthungelwano kwiNethiwekhi | | Izicelo
Isikhupheli sevidiyo seSnapTube sesona sikhuphelayo sevidiyo kwezixhobo zakho ze-android ezisetyenziswayo ngoku. Ivumela ukhuphelo kwiiwebhusayithi ezahlukeneyo ezinjengeYouTube, iMetaCafe, iDailyMotion kunye neFacebook ne-Instagram. Nangona sisicelo se-android, asifumaneki kwiVenkile yokuDlala kuGoogle. Isizathu kukuba uGoogle uthintela zonke izinto ezikhutshelwayo ze-YouTube. Kodwa zikho ezinye iindlela ezikhoyo.
1 Izixhobo zoKhuphelo zoKhuphelo zoSetyenziso:
2 Ndiyitshintsha njani indawo yokukhutshelwa kwi-app ye-SnapTube?
3 Inkqubo yokutshintsha indlela yokukhuphela:
4 Isebenza njani i-SnapTube?
Izixhobo zoKhuphelo zoKhuphelo zoSetyenziso:
khuphela i-Snaptube APK, ujongano lomsebenzisi olumangalisayo losetyenziso luyakuvumela ukuba uphathe ukhuphelo kakuhle.
I-SnapTube iza neendlela ezahlukeneyo zokusetha ukukhawulezisa ukhuphelo lwevidiyo.
I-SnapTube ibonelela ngenjini yokukhangela enamandla kunye neempawu zesithonjana.
Ukongeza, ibonelela ngokukhuphela iividiyo ngomgangatho we-60FPS kunye nesisombululo se-4K.
Ukubonelela ngokukhuphela ngokukhawuleza, usetyenziso lusebenzisa unxibelelwano oluninzi.
Uya kufumana yonke iwebhusayithi kwindawo enye.
Akukho ntengiso okanye i-pop-ups.
Unokuzikhuphelela iividiyo ezifihliweyo kwiYouTube.
Ngokulula, kunokwenzeka ukuba uguqule ifayile yevidiyo ibe yenye yeaudio.
Umsebenzi weebhukumaka nawo uyafumaneka. Unokucwangcisa ukhuphelo oluninzi ngexesha elinye.
Ndiyitshintsha njani indawo yokukhutshelwa kwi-app ye-SnapTube?
Zonke iividiyo zikaYouTube zigcinwa ngokuzenzekelayo kugcino lwangaphakathi. Ukufikelela kuyo, unokulandela ikhonkco Ugcino lwangaphakathi> SnapTube> Ividiyo. Kwimeko apho kungekho sithuba saneleyo emva kokukhuphela iividiyo ezininzi, inokuphazamisa ukusebenza kolunye usetyenziso. Isixhobo sakho siza kuqala ukusebenza kancinci ngokuhamba kwexesha. Ukuthintela le meko, ungatshintsha indlela yokukhuphela iividiyo.
Inkqubo yokutshintsha indlela yokukhuphela:
Vula isoftware yokukhuphela ividiyo ye-SnapTube.
Kukho i icon yegiya kwikona ephezulu ngasekunene kwesikrini. Cofa kuyo ukuvula useto.
Ngoku, khetha ukhetho «Indlela yokukhuphela».
Kwaye ukhethe iMicrosoftSD ukugcina ividiyo kwisixhobo sangaphandle ukusukela ngoku.
Unokwenza kwakhona ifolda eyahlukileyo. Kwikona ephezulu ngasekunene, kukho i icon eneenkcukacha, cofa kuyo.
Kananjalo, nika igama njengeSpapTube kwaye uyivule ngokuthepha kube kanye.
Kuya kufuneka uqinisekise ngokunqakraza ku «Khetha le folda». Unako kwakhona ukwenza incwadi eneenkcukacha ngokucofa u "Yenza incwadi eneenkcukacha entsha" ukhetho.
Isicelo siza kuphinda sikubuze isiqinisekiso, cinezela «Khetha» ukuze usiqinisekise.
Ngoku indawo yokukhuphela itshintshiwe ngempumelelo kugcino lwangaphandle. Okokugqibela, unokuzikhuphelela ividiyo ngaphandle kokukhathazeka ngendawo yokugcina.
Ungayidlala ividiyo kwiGalari okanye ungalandela ngesandla umphathi wefayile> ikhadi le-SD> SnapTube. Yiyo yonke.
Isebenza njani i-SnapTube?
Njengoko igama lesicelo lisitsho ukuba likhutshiwe ngephanyazo. Isebenza ikakhulu kwiinjini zokukhangela ezahlukeneyo.
Udidi lokuKhangela: Udidi lokuKhangela lukunceda ukuba uphonononge umxholo wakho onqwenelekayo njengoko unganxibelelana ngokwendidi ezilishumi ezahlukeneyo. Umzekelo, iividiyo ezihlekisayo, iingoma, imifanekiso, njl. Ukutshintsha ukusuka kolunye udidi uye kolunye, cofa nje iscreen ukusuka ngasekhohlo uye ngasekunene.
Ukukhangela amagama aphambili: Ngokukhangela amagama aphambili, unokufumana iividiyo ozifunayo. Emva kokufumana into oyifunayo, unokuzikhuphela kwaye uyigcine ukuze ujonge kamva.
Hit Trending: Unokufumana kwakhona ukuhamba kunye nokubetha iividiyo ngeetshathi zomculo kunye nokunye okuninzi koku.
Singakhankanya nokuba i-SnapTube APP kulula kakhulu ukuyisebenzisa kunye nokukhuphela ngokukhawuleza. Ukufumana isiphumo se-HD, ungasebenzisa uhlobo lwayo lweprimiyamu nge- $ 1.99 kuphela. Zombini izikhuphiswano zayo TubeMate, Vidmate okanye Videoder (
khuphela ividiyo Apha) unokusebenza okufanayo, kodwa utshintsho lilele kunxibelelwano olunamandla lokukhuphela kunye neenketho ezahlukeneyo. Kuya kufuneka sichaze ukuba awungekhe uyifumane le app kwiGoogle Play Store ngenxa yemigaqo-nkqubo yelungelo lokushicilela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Ungayitshintsha njani indlela yokukhuphela usetyenziso lweSnapTube?
Sebenzisa umyinge onguziro weCredomatic Costa Rica
Fumana iCredomatic Costa Rica Bac Card
Iinqobo zokuziphatha zoHlelo